Iingcebiso zokunciphisa umkhondo wekhabhoni | IBezzia
UMaria vazquez | 25/09/2021 10:00 | yokuPhila
La Imibhalo yenyawo yekhabhoni Sisixhobo sokulinganisa impembelelo okanye uphawu lomntu, umbutho okanye imveliso eshiya iplanethi. Ubalo lwekhabhon dayoksayidi (CO2) ekhutshwa, ekhutshelwa kwiatmosferi ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kumntu, umbutho okanye imveliso.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele iimpembelelo zalo kufudumala lwehlabathi kwaye njani kwinqanaba lomntu siqu zininzi izinto esinokuzenza ukunciphisa ukunyathela kwethu. Kwaye nangona silikhonkco elincinci kwikhonkco sinokukunceda ukuyinciphisa. Intoni? Ukusebenzisa iingcebiso zokunciphisa i-carbon footprint esiyabelana nawe namhlanje.
1 Cinga ngendlela otya ngayo
2 Nciphisa ukusetyenziswa kombane kwikhaya lakho
3 Thenga kancinci kwaye ungcono
4 Khetha indlela ohamba ngayo
Cinga ngendlela otya ngayo
Idatha evela kwiingxelo zamva nje iyangqinelana nokubonisa oko Inkqubo yokutya yanamhlanje ayinakulondolozwa. Kuqikelelwa ukuba ivelisa isinye kwisithathu sokukhutshwa kwerhasi. Umhlaba obekelwe ezolimo uhlala kwi-34% yomhlaba womhlaba kwaye inxalenye yawo iyasetyenziselwa ukondla ezi zilwanyana zasefama. Yiyo loo nto ukunciphisa umda ekusetyenzisweni kwenyama, ngakumbi inyama yenkomo, kuyinto eyimfuneko namhlanje, njengokubheja kwimveliso yalapha neyamaxesha athile.
Singanegalelo kwintengo yethu yokunciphisa inkunkuma yokutya kunye nenkunkuma yeplastiki. Thenga into oyifunayo kwaye ziyeke ukupakisha kunye neengxowa ukuze umkhondo weenyawo zakho zincinci.
Nciphisa ukusetyenziswa kombane kwikhaya lakho
Ikhilowathi nganye yombane esiyisebenzisayo icinga ukuba ukukhutshwa kwe-gram ezingama-400 zecarbon dioxide emoyeni. Ukonga kunye nokusebenza kwayo kuphela kwendlela enokubakho ukunciphisa umda wekhabhoni. Kodwa ungayiphumeza njani? Nazi ezinye iingcebiso ezincinci zokunciphisa i-carbon footprint yekhaya lakho.
Thatha ithuba lokukhanya kwendalo kwaye isebenzisa iibhalbhu ze-LED
Gcina imali ngokufanelekileyo ukunqanda ilahleko yamandla eqhelekileyo. Jonga ubushushu beendonga ukuba uza kwenza uguquko kwaye utshintshe iifestile zakho ezindala ukuze zisebenze ngokuchanekileyo. Uya kugcina kwiinkqubo zomoya.
Ukugqitywa ngu iinkqubo ezifanelekileyo zomoya kwaye uzisebenzise ngobulumko. Khumbula ukuba ukunciphisa okanye ukunyusa ukufudumeza kwakho isidanga esinye kuya kubangela ukuba ityala lakho lihluka phakathi kwe-5 kunye ne-10% kwaye kuya kubangela ukuba ukuphuma kwe-CO2 kunyuke. KUNYE lawula imeko yomoya kuba basebenzisa amandla amaninzi; ungayihlukumezi kwaye uyihlanganise nezinye izixhobo zokugcina indlu ipholile ehlotyeni. Ukulawula ukusetyenziswa kwazo zombini, soloko usebenzisa ii-thermostats ezinokucwangciswa.
Xa ilixesha lokuba uzitshintshe, ubheje izixhobo ezifanelekileyo: bachitha imali encinci kwaye bakhuphe kancinci i-CO2
Thenga kancinci kwaye ungcono
Thenga kancinci kwaye ungcono yenye yeengcebiso zokunciphisa ubushushu bekhabhoni ngokubanzi ngokubanzi, kodwa kungabalulekanga kangako. Iinkqubo zokuvelisa kunye nezothutho Imveliso nganye inemveliso ethile ye-carbon dioxide enxulunyaniswa nayo.
Ngaphambi kokuba uthenge nayiphi na imveliso zibuze: ngaba ndiyayifuna? Ukuba ayisiyonto oza kuyisebenzisa rhoqo, jonga imali mboleko okanye irente njengesixhobo. Kwaye ukuba uza kuthenga into, yenze ngokuthembekileyo, ujonge iilebheli yayo kuye yazi uzinzo okanye ukusebenza kwayo. Yiya kwimarike esekwe ngesandla kwaye uphinde usebenzise yonke into onokuyenza ngaphambi kokuba uyilahle.
Khetha indlela ohamba ngayo
Elinye icebo lokunciphisa i-carbon footprint yethu inxulumene nendlela esijikeleza ngayo isixeko sethu. Sebenzisa ibhayisikile okanye izithuthi zikawonkewonke xa singakwazi ukuhamba zezona zizinzi ezizezinye ezinokulondolozeka. Ukuba akunakwenzeka, ukuhamba ngemoto noogxa bakho okanye abamelwane kuhlala kucetyiswa. Ngamafutshane, ukuba uza kuqhuba nini kwaye uqhuba kanjani.
Ngaba sele usebenzise naziphi na ezi ngcebiso kwimini yakho yemihla ngemihla ukuze uphile ubomi obuzinzileyo? Ukuba awukayiqalisi okwangoku, sukuzama ukuyenza ngaxeshanye; Yiya ngokubandakanya iinkqubo nganye nganye ukuya kwimini yakho kwaye utyale imali ekuphuculeni amandla akho asekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Iingcebiso zokunciphisa umda wekhabhoni
Amagumbi okuhlambela adityaniswe kwigumbi lokulala, ewe okanye hayi?